ခြစ်ရာ Card များကိုအခမဲ့အွန်လိုင်း | ကစား 100% 2ကြိမ်မြောက်အပ်နှံပွဲစဉ် Up ကို£ 200 စေရန် | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! ခြစ်ရာ Card များကိုအခမဲ့အွန်လိုင်း | ကစား 100% 2ကြိမ်မြောက်အပ်နှံပွဲစဉ် Up ကို£ 200 စေရန် | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
ခြစ်ရာ Card များကိုအခမဲ့အွန်လိုင်း | ကစား 100% 2ကြိမ်မြောက်အပ်နှံပွဲစဉ် Up ကို£ 200 စေရန်
Play စ Scratch Card များကိုအခမဲ့အွန်လိုင်းထိုအခါဦးဝင်း Daily သတင်းစာတစ်ခုခု – £5အခမဲ့အပိုဆုဖမ်းပြီး
အဆိုပါ '' ခြစ်ကတ်များအခမဲ့အွန်လိုင်း’ အဘို့အများကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Slotfruity.com
အဆိုပါရုပ်ရှင်လူပျော်စရာအချိန်အလောင်းအစားနှင့်ရှိသည်ဘယ်မှာအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေသောနေရာများအဖြစ်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံပြပြီ. ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, လူခဲတစ်ဦးလောင်းကစားရုံသှားဖို့ဘယ်အချိန်မဆိုရ. မဆိုပျမ်းမျှအားလူတစ်ဦးအချိန်ကိုကယ်တင်ပေမယ်အဖြစ်ကောင်းစွာပျော်စရာရှိသည်ဖို့လိုလား. ပေါက် Fruity ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကစားသမားများအတွက်အွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံစတင်ခဲ့သည်ကွောငျ့. ကြှနျုပျတို့၏ website နှင့်အတူကစားခြင်း၏အားသာချက်များတစ်ခုမှာကျိန်းသေအပါလိမ့်မယ် ခြစ်ရာကတ်များအခမဲ့အွန်လိုင်း.
Scratch Card များကိုအခမဲ့အွန်လိုင်းကစားခြင်း၏အခွင့်အလမ်းကိုအမိအရဖမ်းဆုပ် – ယခုဝင်မည်
အတွက်ဖြန့်ချိ 2015, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းအခမဲ့လောင်းကစားရုံအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံကိုဤလောကသို့နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အများဆုံးဆန်းသစ်ဂိမ်းများနှင့် slot နှစ်ခုတတ်၏.
ကျနော်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်မွမ်းမံနှင့်အတူလတ်ဆတ်တဲ့စောင့်ရှောက် ဂိမ်းများနှင့် slot နှစ်ခု.
လူအားလုံးတို့သည်ဂိမ်းအနုပညာ developer များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံအဖွဲ့ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ.
ကျွန်ုပ်တို့၏လူထုပူးပေါင်း – အကြိုးရှိ
အားလုံးနိူးအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်. ကျနော်တို့တာဝန်ရှိလောင်းကစားအားပေးအပေါင်းတို့နှင့်အသုံးပြုသူဖြစ်ကြောင်းအာမခံ 18 သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပေးအပ်မီကအထက်အနှစ်.
ထိုခဏခြင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ဖို့ပြီးနောက်, လူအပေါင်းတို့သည်သစ်ကိုဂိမ်းကစား£5အခမဲ့မရှိသိုက်ဆုကြေးငွေရနိုင်ပါလိမ့်မည်. ဤပထမကျွန်တော်တို့ရဲ့လောင်းကစားရုံကြိုးစားရန်သူတို့ကိုနိုင်ပါတယ်, တကယ်တော့မဆိုငှမပါဘဲ. ဒီနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းအခမဲ့ခြစ်ကတ်များကဲ့သို့ချန်နယ်ကတဆင့်အမျိုးမျိုးသောဆုကြေးငွေဆက်ကပ်.
slot ထိုအ Scratch Card များကိုအခမဲ့အွန်လိုင်းနဲ့အတူပျော်စရာရှိခြင်း
အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများ၏အခွင့်အရေးဂိမ်းလွှမ်းမိုးသောအရေအတွက်ပါဝင်. ကစားသမားခြစ်ကတ်များအခမဲ့အွန်လိုင်းကစားရလာသောအခါ Merlin ရဲ့သန်းပေါင်းများစွာနှင့် Pandamania တူဂိမ်းကစားခြင်းအလျှော့ပေးလိုက်လျောဖြစ်လာ.
ကွဲပြားခြားနားတဲ့လောင်းကစားရုံဂိမ်း, slot နှစ်ခုနှင့်ခြစ်ရာကတ်များဒီအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံတစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအတှေ့အကွုံလုပ်. တိုင်းသိုက်နဲ့အတူနှင့်ဖောက်သည်များကမပြည့်စုံသည်ကိုအာမခံလိုအပ်ချက်နှင့်အတူ, ကျွန်တော်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများထွက်ပေး, အပိုဆုကြေးငွေများနှင့်အများကြီးပို.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Customer များအဖို့စစ်မှန်သော, ကျနော်တို့လုပ်ရတဲ့အခမဲ့ဂိမ်းအာမခံ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ၏စိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့အလုပ်ရတဲ့အခမဲ့ဂိမ်းသေချာ. ကျွန်တော်တို့၏ slot Fruity ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းကအမြဲတမ်းသူတို့ရှိစေခြင်းငှါမဆိုမေးမြန်းချက်တွေနဲ့သုံးစွဲသူတွေကိုကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်. အဆိုပါ e-mail, လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝဘ​​်စာမျက်နှာပေါ်သည်. prompt တုန့်ပြန်အဂိမ်းပေါ်တယ်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပြဿနာမှပေးထား.
အဘယ်အရာကိုမျှ Android ပေါ်မှာအွန်လိုင်းအခမဲ့ခြစ်ကတ်များကစားထက်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်, iOS သို့မဟုတ် Windows မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် tablet များ. ကျနော်တို့လည်ပတ်မှုစနစ်များကိုအသီးအသီးအဘို့အ version ကိုဖြန့်ချိခဲ့ကြ
ကြှနျုပျတို့ပွုအပေါငျးတို့သငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ encrypted လိုင်းများမှတဆင့်ရှိပါတယ်.
ကျနော်တို့ MasterCard ကိုတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေးချယ်စရာပေး, ဗီဇာခရက်ဒစ်နှင့်မြီစားကတ်တွေ, PayPal ကစသည်တို့ကိုလည်း Ukash တူမိုဘိုင်း application ကို.
နိမ့်ဆုံးသိုက်ပမာဏကိုသာ£ 10, ထို့ကြောင့်မည်သူမဆိုကစားနိုင်ပါတယ်.
ချီတုံချတုံဖောက်သည်လည်းမိုဘိုင်းအကြွေးကို အသုံးပြု. ဆော့ကစားနိုင်.
ပေါက် Fruity တွင်သုံးပါရန်ပလက်ဖောင်း
အဘယ်အရာကိုမျှ Android ပေါ်မှာအွန်လိုင်းအခမဲ့ခြစ်ကတ်များကစားထက်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်, iOS သို့မဟုတ် Windows မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် tablet များ. ကျနော်တို့ဂိမ်းကစားခြင်း၏အရည်အသွေးအတွက်မဆိုအပေးအယူလုပ်မပါဘဲလည်ပတ်မှုစနစ်များကိုအသီးအသီးအဘို့အ version ကိုဖြန့်ချိခဲ့ကြ. အသုံးပြုသူများအများ၏လက်ဖျားမှာကာစီနိုဂိမ်း! အဘယျသို့ပျင်းနေတဲ့လူတစ်ဦးလှတျမွောကျဖို့ပိုအရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်?
ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းအခမဲ့ခြစ်ကတ်များနှင့်အတူများစွာသောဆွဲဆောင်မှုဆက်ကပ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံမြှင့်တင်ရန်, ကျွန်တော်တို့ themes များနှင့်ဂရပ်ဖစ်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူပေါက် Fruity တက်ကြွနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရာ၌ခန့်ထားပြီ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနှုန်းမှာဗြိတိန်နိုင်ငံအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားတို့တွင်အမြင့်မားသည်နှင့်ဤကွောငျ့ခက်ခဲပြုပြင်သောအဖွဲ့နှင့်ပေါ် မူတည်. built ဝက်ဘ်ဆိုက်၏.
ခြစ်ရာ Card များကို| နှစ်သက် 200% 1st အပ်နှံပွဲစဉ် Up ကို£ 50 ဦးရန်